Lalao Royal Rumble 2017: karatra lalao feno ho an'ny WWE PPV voalohany amin'ny 2017 - Wwe
Lalao Royal Rumble 2017: karatra lalao feno ho an'ny WWE PPV voalohany amin'ny 2017
ny Royal Rumble mitranga ao amin'ny Alamodome amin'izay mety ho lehibe indrindra ho fikotroky amin'ny fotoana rehetra. WWE dia mitady hivarotra tapakila maherin'ny 60.000. Mba hanaovana izany dia mitaky anarana lehibe izy ireo. Ny sasany amin'ireo anarana lehibe voamarina fa hiseho dia Goldberg, Brock Lesnar, ary John Cena.
rehefa tsy fantatrao izay hatao amin'ny fiainanao
Ny Undertaker dia antenaina fa ho anisan'ny seho, ary i Shawn Michaels dia honohono fa hiseho amin'ny andraikitra tsy mitolona satria any amin'ny tanànany any San Antonio no misy azy. Samy hiseho ny Undertaker sy i Shawn Michaels manta amin'ny 9 Janoaryfaha. Antenaina fa samy hanambara ny andraikiny avy ao amin'ny Mikotrana.
Ny fananganana ho an'ny ho fikotroky nanomboka taorian'izay Sakan-dalana: Faran'ny lalana.
Ity ny lisitry ny lalao Royal Rumble 2017:
Sheamus & Cesaro (c) vs Gallows & Anderson - Tompondakan'ny ekipa RAW Tag Team - mpitsara roa voatendry hifanandrina
Gallows & Anderson dia norobaina tamin'ny fandresena nandresy tamin'ny manta
Sheamus sy Cesaro dia nitazona onjam-pahefana hatramin'ny nanesorany ny tompondakan'ny ekipa tag ela indrindra teo amin'ny tantaran'ny WWE - Ny Andro Vaovao. Taorian'ny nandreseny ny Andro Vaovao tamin'ny lalao famaranana dia nifarana ny fifanolanan'izy ireo. Nifindra tamin'ny fifandonana tamin'i Gallows & Anderson izy ireo avy eo.
Karl Anderson dia nibata ny fandreseny voalohany tamin'ny WWE nanoloana an'i Cesaro. Nandresy an'i Cesaro i Luke Gallows manta koa.
Tamin'ny lalao tompon-daka tamin'ny ekipa tag tamin'ny 16 Janoaryfaha, Gallows & Anderson dia toa naka ny fandresena sy ny fiadiana ny tompondakan'ny ekipa tag avy amin'i Cesaro & Sheamus, saingy noho ny antony nanonganan'i Sheamus tsy nahy ny mpitsara tany am-boalohany, dia tsy nahazoan-dalana afa-tsy i Gallows & Anderson. Izany dia nahatonga ny famerenana lalao ho an'ny Royal Rumble seho kickoff, izay mety hanapahana hevitra ny fifanolanan'izy ireo indray mandeha. Mpitsara roa no hotendrena amin'ny lalao hisorohana ny shenanigan na ny famaranana feno vovoka.
afaka Ny lehibe mandresy ny fifanolanana?
Ny fifandonana teo amin'i Sasha Banks sy Nia Jax dia nanomboka ny alina taorian'io Sakan-dalana: Faran'ny lalana. Sasha Banks dia avy amin'ny fiarovana anaram-boninahitra tsy nahomby tamin'i Charlotte, ary namarana ny fifanolanan'izy ireo. Rehefa niantso an'i Charlotte hiarahaba azy izy dia i Nia Jax no nivoaka ho solony.
Nandritra ny herinandro vitsivitsy dia nanafika an'i Sasha Banks i Nia Jax tamin'ny lohaliny naratra (azony taminy izany sakana lalao hifanandrinana amin'i Charlotte) hatrany hatrany. Sasha Banks dia hahazo ny fanavotany ihany koa rehefa nandany fotoana tamin'i Nia izy hiatrika an'i Charlotte amin'ny Tompondakan'ny vehivavy RAW ao amin'ny Mikotrana. Rehefa mody manta ho an'ny Ramo, nambara ho anisan'ny seho kickoff izy ireo.
AJ Styles (c) vs John Cena - Tompondakan'i WWE
AJ Styles sy John Cena dia hiatrika lohany amin'ny lalao laharana fahatelo ataon'izy ireo
Ny AJ Styles dia nandresy an'i Dolph Ziggler sy Baron Corbin tamin'ny fizarana farany SmackDown Live hamarana ny taona ho Tompondakan'i WWE. Talohan'ity seho ity dia niverina tany WWE i John Cena taorian'ny roa volana sy tapany ary nanambara fa hifaninana amin'ny Tompondakan'ny WWE amin'ny Royal Rumble. Nifandray tanana ireo roa mpifaninana taloha mba hanidy ny seho.
Niverina niaraka tamin'ny fihetsika tsy hita mihitsy i Cena tamin'ny fihazakazahany ho zazakely ambony WWE. Hanenjika ny 16 izyfahaTompondaka eran-tany hifamatotra amin'ilay rakitsoratra miaraka amin'i Ric Flair. Cena dia manana puce lehibe eo an-tsorony, izany hoe manana faharesena roa izy eo am-pelatanan'ny AJ Styles, izay ahazoana fandresena madio.
Noravan'ireo mpifanandrina ny trano Summerslam, ary tsy tokony hisy tsy hitovizany amin'ny seho adiny efatra.
Kevin Owens (c) vs Roman Reigns - lalao WWE Universal Championship (w / Chris Jerika nahantona tao anaty tranom-boaloboka)
iza no mampiaraka amin'ny fampisehoana gabbie
Kevin Owens dia miatrika ny Roman Reigns tsy misy ny fanampian'i Chris Jeriko
Kevin Owens sy Roman Reigns dia niatrika imbetsaka tao anatin'ny volana vitsivitsy lasa izay, niaraka tamin'ny Ilay alika be mahazo ny fandresena matetika. Isaky ny nandresy an'i Reigns i Owens dia noho ny fanampian'i Chris Jeriko. Raha ny zava-misy dia ny fiarovana anaram-boninahitra rehetra nataon'i Kevin Owens dia noho ny fitsabahan'i Jeriko.
Hiatrehana io olana io, manta Nanambara momba izany ny Tale jeneraly Mick Foley manta rehefa Sakan-dalana: Faran'ny lalana fa ny Reigns dia hahazo tifitra hafa amin'ny Tompondakan'i Universal ao amin'ny Royal Rumble, ary i Chris Jeriko dia hajanona ambony noho ny peratra amin'ny tranom-boalavo hiarovana ny fanelingelenana amin'ny lalao.
Ilay olona mandresy amin'ity lalao ity dia mety hiditra an-tsehatra Wrestlemania 33 amin'ny maha Tompondaka Erantany.
Charlotte (c) vs Bayley - Tompondaka Tompondakanana Raw
Afaka nandresy i Bayley Ny Mpanjakavavy Amin'ny karama-isaky-mijery?
Resin'i Bayley tamin'i Nia Jax tamin'ny andiany voalohany an'ny manta tamin'ny 2017 ho lasa mpifaninana laharana voalohany amin'ny Tompondakan'ny vehivavy manta. Ny fifandonana Charlotte-Bayley dia nanana ny voany aorian'izay Hell in A Cell. Toa ny WWE nandeha tany Charlotte vs Bayley tany Sakan-dalana: Faran'ny lalana, saingy niova ny drafitra rehefa nanapa-kevitra ny hamono ny fifanolanana Sasha Banks vs Charlotte izy ireo.
Taorian'ny nivoahan'i Charlotte tamin'ny fandresena, ary Tompondakan'ny Vehivavy 4 fotoana, nifanehatra tamin'i Charlotte i Bayley ary nanambara ny fikasany hanohy ny Tompondakan'ny Vehivavy Raw. Bayley dia nandresy tampoka an'i Charlotte tamin'ny manta rehefa Sakan-dalana: Faran'ny lalana, saingy nivadika ilay fandresena satria natondron'i Charlotte ny sorony. Ny herinandro manaraka dia nandresy an'i Bayley i Charlotte tamin'ny alàlan'ny fomba ratsy rehefa ilay mpiaro azy Dana Brooke no mpitsara mpitsidika manokana nanampy an'i Charlotte hahazo ny fandresena.
ahoana no ahitako ny talentako
Bayley dia nifanatrika tamin'i Stephanie McMahon momba izany rehetra izany, ary ny manta Nilaza tamim-pahatsorana ny kaomisera The Hugger fa tsy tiany izy, sady nidera an'i Charlotte noho izy kaliberista avo lenta, lehibe noho ny superstar fiainana. Nitsikera an'i Bayley tamin'ny naha-olon-tsotra azy fotsiny izy, ary rehefa namaly faty i Bayley dia nanohitra azy mafy i Stephanie, izany hoe, Nia Jax. Araka ny voalaza dia nandresy ny superstar vehivavy lehibe indrindra tao WWE izy ka lasa mpifaninana voalohany.
Manana fanamby goavana i Bayley. Charlotte dia mbola tsy resy amin'ny lalao tokana amin'ny Pay-Per-View.
Rich Swann (c) vs Neville - Tompondaka amin'ny Cruiserweight
Rich Swann no handray an'ity King Of The Cruiserweights
Tsy misy isalasalana fa ny dingan'i Neville efa ela nialany tamin'ny fizarana Cruiserweight dia niteraka fiainana vaovao tao. Nanana andraikitra lehibe izy tamin'ny fizarana farany ary noderain'ny mpankafy sy ny mpitsikera izy noho ny anjara asany vaovao tamin'ny WWE. Nandeha onjam-pahefana izy. Amin'ny 27 Desambrafaha, Neville nandresy an'i Rich Swann tamin'ny 205 Miaina amin'ny lalao tsy anaram-boninahitra. Amin'ny 10 Janoaryfahafanontana ny Live 205, Neville dia nihantsy an'i Swann ho an'ny Cruiserweight Championship. Nasain'i Swann nanonona fotoana sy toerana izy. Neville hoy ny Royal Rumble no fotoana.
Nikki Bella, Naomi, & Becky Lynch vs Alexa Bliss, Mickie James, & Natalya - Enina vehivavy tag ekipa lalao
Ny 3 SmackDown Live hiroso amin'ny lalao ekipa tag ny fifaninanana
Ny lalao dia natsangana tamin'ny lalao mody SmackDown Live ho an'ny Royal Rumble. Ny endrik'ilay fizarana, Becky Lynch dia nanomboka fifandonana tamin'i Mickie James. Natalya sy Nikki Bella dia efa teo amin'io fotoana io, satria nanaiky i Natalya fa nanafika an'i Nikki Bella tao Serivivor Series ary nandray ny toerany tao amin'ny ekipan'izy ireo. Niverina tamin'ny 24 Janoary i Naomyfaha, ary nisy ny fifanolanana tamin'i Alexa Bliss. Toa ny fandaharana lohateny manaraka izany. Angamba i Naomi dia afaka nametaka ny Tompondakan'ny Vehivavy SmackDown hanamafy ny fitakiany amin'ny lalao titre.
Azo inoana fa ny kintana indrindra ho fikotroky lalao nanomboka tamin'ny 1992
Goldberg dia nanambara ny tenany ho mpandray anjara voalohany tamin'ny 2017 Royal Rumble ny alina taorian'io Serivivor Series. Ny herinandro taorian'io dia nilaza i Paul Heyman mampihetsi-po fa ho ao i Lesnar ho fikotroky lalao ihany koa. Izy roa dia voatery hiampita lalana, ary mety samy hifandany ny lalao, ka hanangana lalao fandresena amin'ny Wrestlemania 33.
Amin'ny 2 Janoaryndfanontana ny Manta, Ny Andro Vaovao, Chris Jeriko, ary Braun Strowman dia nanambara ny fidiran'izy ireo tamin'ny Royal Rumble lalao. Amin'ny 3 Janoaryrdfanontana ny SmackDown Live, Baron Corbin no mpikambana voalohany amin'ny marika manga nanambara ny fidirany tao amin'ny Royal Rumble lalao.
Amin'ny 9 Janoaryfaha, Seth Rollins nisioka hoe hiditra ao amin'ny Royal Rumble. Tamin'ny fiandohan'ny 9 Janoaryfahafizarana an'ny Manta, Rollins dia nilaza tamin'i Mick Foley sy Stephanie McMahon ny fikasan'izy ireo hiditra ao ho fikotroky lalao. Na izany aza, ny 23 Janoaryrdfanontana ny RAW, Stephanie McMahon dia nametraka azy tamin'ny lalao nifanandrinana tamin'i Sami Zayn, izay raha nandresy i Zayn dia handray ny toeran'ny Rollins eo amin'ny Rumble. Noho ny fanelingelenana ankolaka nataon'ny Triple H, dia resin'i Zayn i Rollins, ka very ny toerany. Ny alin'iny ihany dia niverina i The Undertaker manta rehefa afaka 10 volana teo ho eo hanambarany fa niditra tao amin'ny Royal Rumble.
Amin'ny 10 Janoaryfahafanontana ny SmackDown Live , Tompondakan'ny Intercontinental Dean Ambrose ary tompon-daka teo aloha The Miz dia nanambara ny fidiran'izy ireo tamin'ny Royal Rumble. Amin'ny Talking Smack ny alin'io alina io dia nanambara ny fidirany ao amin'ny Mikotrana.
Alohan'ny 16 Janoaryfahafanontana ny RAW, Sheamus sy Cesaro dia nanambara ny fidirana ao amin'ny Royal Rumble lalao amin'ny twitter. Amin'ny 17 Janoaryfahafanontana ny SmackDown Live, Nanambara i Bray Wyatt fa hiditra ao izy ireo, Randy Orton, ary Luke Harper Mikotrana.
Amin'ny 23 Janoaryrdfanontana ny RAW, Big Show, Big Cass, ary Rusev dia voamarina fa handray anjara amin'ny Mikotrana. Araka ny voalaza etsy ambony, Sami Zayn dia nahazo ny toerany iny alina iny ihany koa.
Amin'ny 24 Janoaryfahafanontana ny SmackDown Live, Mojo Rawley dia nandresy 10-Man Battle Royal hahafeno fepetra amin'ny toerana iray ao amin'ny Royal Rumble.
Io angamba no tsy ampoizina indrindra Royal Rumble lalao an-taonany. Misy anarana vitsivitsy eny amin'ny rivotra toa an'i Finn Balor. Mety ho lasa tsara indrindra io Royal Rumble lalao ao anatin'ny folo taona. Na izany aza, amin'izao fotoana izao, ny Undertaker dia ankafizin'ny olona mandresy ny Royal Rumble lalao.
Ity ny lisitr'ireo mpandray anjara nohavaozina
Goldberg - manta
Brock Lesnar - manta
Big E - manta
Xavier Woods - manta
Kofi Kingston - manta
Chris Jeriko - manta
Braun Strowman - manta
Baron Corbin - SmackDown Live
The Undertaker - Hafa
Dean Ambrose - SmackDown Live
The Miz - SmackDown Live
Dolph Ziggler - SmackDown Live
Cesaro - manta
Sheamus - manta
Bray Wyatt - SmackDown Live
Randy Orton - SmackDown Live
Luke Harper - SmackDown Live
Sami Zayn - manta
Big Show - manta
Big Cass - manta
Rusev - manta
Mojo Rawley - SmackDown Live
Alefaso aminay torohevitra vaovao ao amin'ny info@shoplunachics.com
teny fiderana tovolahy eo amin'ny endriny
ny fomba hahazoana ny vadinao amin'ny vehivavy hafa
inona no dikan'ny tafika bts
ahoana ny fijanonana tsy hiresaka amin'ny olona rehetra
inona no vitan'ny lainga amin'ny fifandraisana